एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवालाई तपाईंले त अचेल हामीलाई चटक्कै बिर्सिनुभो नि भन्दै ब्यग्य गरेपछि – Etajakhabar
एमाले अध्यक्ष ओलीले देउवालाई तपाईंले त अचेल हामीलाई चटक्कै बिर्सिनुभो नि भन्दै ब्यग्य गरेपछि
ओलीको पहिलो प्रश्न
ओली : तपाईंले त अचेल हामीलाई चटक्कै बिर्सिनुभो नि ?
प्रधानमन्त्री : त्यस्तो होइन । मलाई पनि बोलाउनुपर्छ भन्ने नै लागेको थियो, तपाईंहरू आउनुभो, राम्रो भो ।
सकारात्मक सन्देशका लागि छलफल
अहिलेको सन्दर्भमा विभिन्न कुरा उठिरहेका छन् । चुनाव सर्ने, मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्नेजस्ता कुरा बाहिर आइरहेका छन् । यस्तो वेला प्रमुख तीन दल एकै ठाउँ बसेर कुराकानी गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र हामी ९माओवादी केन्द्र० सँगै बसेर राम्रो सन्देश दिन छलफल गरौँ भनेर तपाईंलाई आग्रह गरेको थिएँ ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनबारे बोलेनन् देउवा
भेटमा ओली र प्रचण्डले सम्बन्धित दलसँगको परामर्श र सहमतिविनै संविधान र निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कदम नचाल्न चेतावनी दिए पनि देउवाले त्यसबारे स्पष्ट जवाफ दिएनन् । ‘उहाँले म निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्न प्रतिबद्ध छु मात्रै भन्नुभो, पुनर्गठन गर्ने कि नगर्ने विषयमा कुरै निकाल्नुभएन,’ बैठकपछि एक नेताले भने ।
ओलीका तीन प्रश्न देउवाका तीन जवाफ
ओली स् चुनाव सर्ने त्यत्रा कुरा उठिरहेका छन् । खास कुरा के हो, प्रमुख प्रतिपक्षीसहित तीन दलमा कुनै छलफल छैन । के गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ तपाईं रु
देउवा स् लामो कुरा धेरै किन गर्ने रु १० र २१ मंसिरको चुनाव यताउति हुँदैन, तोकिएकै मितिमा हुन्छ । तोकिएकै समयमै गर्छु । यो मेरो प्रतिबद्धता हो, घोषणा पनि हो ।
ओली स् चुनावको प्रक्रिया सुरु भइसक्यो । तपाईं कहिले राज्यमन्त्री थप्ने, कहिले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ । यो सरकारको काम त चुनाव सम्पन्न गराएर नयाँ संसद्बाट निर्वाचित सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने हो, निर्वाचन आचारसंहिताका कारण सिन्को पनि भाँच्न पाइँदैन । निर्वाचन आचारसंहिताबारे के हो तपाईंको प्रतिबद्धता ?
देउवा : होइन, त्यस्तो हुँदैन । म आचारसंहिता पूर्ण पालना गरिहाल्छु नि ।
ओली स् विधेयक सरकारले पेस गर्ने हो । आफैँले एकल संक्रमणीय मत प्रणालीबाट निर्वाचित नहुने गरी संसद्मा राष्ट्रिय सभा सदस्यसम्बन्धी विधेयक पेस गर्ने अनि अहिले त्यही प्रणालीबाट निर्वाचित हुनुपर्छ भनेर विधेयक पास नगर्ने के हो ताल रु तपाईंहरू पास गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि भाग्दै हुनुहुन्छ रु
देउवा : त्यतिवेला गल्ती भएछ, के गर्ने । एकल संक्रमणीय प्रणालीबाटै राष्ट्रिय सभाका सदस्य निर्वाचित हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ । बसौँ, छलफल गरौँ । नयाँ पत्रिकाले छापेको छ ।
प्रचण्डको पहलमा छलफल
सरकारले निर्वाचन सार्ने तथा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी गरेको खबर बाहिर आएपछि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीसँग छलफलका लागि समय मागेका थिए । गत मंगलबार कानुन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि संविधान र आचारसंहिताविपरीत दुवै काम नगर्न प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै सजग गराउने सहमति ओली र प्रचण्डबीच भएको थियो ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, आश्विन २७, २०७४ समय: ८:२९:४६